Wararka Maanta: Jimco, July 27, 2018-Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Shan Shirkadood ka shaqeyn donaan qaadista xujeyda
Wasiirka ayaa sheegay in Shan Shirkadood ka shaqeyn doonaan soo qaadista xujeyda Soomaalida, kuwaa oo sida uu hadalka u dhigay hadaba bilaabay howlahoodii shaqo.
‘’Sanadkan wuxuu uga duwan yahay sanadihii hore shirkaddaha ayaa si buuxda u maamuli doona howlaha xajka, halka kaalinta xukumadda-na ay noqon dooto oo kaliya kor joog-teyn oo kaliya ayuu yiri Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta.
Wasiiru-dowlaha ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in dowladda Soomaaliya siyaasadey-neyso arrimaha Xajka, isaga oo intaa ku daray in madaxda ugu sareysa dalka dadaal badan ku bixiyeen sidii ay xujeyda Soomaaliyeed u tagi lahaayeen sanadkan xajka.
‘’Waxaan rabnaa in si hor dhac ah u sheeg-no in hadda wax walba soo dhamaadeen, dhawaanna xujeyda tagi doonaan dalka Sacuudiga, waxaan beeni-neynaa wararka leysla dhax-marayo ee ah in dowladdu siyaasadey-neyso arrimaha Xajka, waxaan cod dheer ugu sheegey-naa xujeyda Soomaaliyeed in ay tagi doonaan sanadkan Xajka’’ ayuu yiri Cabdi Xakiin Xassan Ashkir.
Hadalka Wasiiru-dowlaha ayaa imanaya xili warar madax-bannaan sheegayaan in uu jiro wali khilaafka dhinaca shirkaddaha ah ee u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo Sacuudiga, taasoo dib u dhac ku keentay looga bartay in xujeyda Soomaaliyeed tagaan dalka Sacuudiga.